Ummeli Wezezakhiwo ZaseJersey City - I-NJ & NY Yezindlu Nezindlu, i-Selectate, Ukudalulwa Kwezokuvikela kanye nabameli Bokuqothuka
Ikhaya / Ummeli eJersey City Real Estate
Ummeli Wezezakhiwo ZaseNew Jersey
Ithimba lethu linikezelwe ekwenzeni konke ukuthengiswa kwakho kwezezakhiwo kungabizi kalula njengoba kungenamthungo futhi kungenayo ingcindezi. Ukuthenga ikhaya ngokuvamile kuyimali ebiza kakhulu umuntu ayenza empilweni yabo. Ukuba ne-NJ Ummeli wezezakhiwo kungenza inqubo inciphe kakhulu. Singakwazi qiniseka ukuthi awukhohlwa utho nokuthi awuthathiwa noma ngubani umuntu obhekene naye umsebenzi. Ngaphambi kokukhetha ummeli waseNew York Real Estate, sincoma ukuthi ucele ukubona isampula le-HUD-1 kusuka kummeli ukuthola ukuthi awukhokhiswa imali ecashile yinkampani yezomthetho.
Uma ucabanga ukutshala imali, singakusiza ukuthi wakhe i-New Jersey Trust noma i-New Jersey LLC ukuvikela impahla yakho. Silapha ukuzokumela.
Sisiza amakhasimende ethu ngoku:
Ukuthengisa Kwasekhaya kuphuma eNew Jersey naseNew York
Ukuthengwa Kwasekhaya kudlula eNew York naseNew York
Ukuvala umthengi uhlangothi
Ukuvala uhlangothi lomthengisi
Ukuthengisa Okufushane ku-NJ
I-LLC nokwakheka kokuthembana
ENew Jersey naseNew York akuphoqelekile ukuba nommeli lapho uthenga noma uthengisa indawo ethengiswayo, kodwa ngokuvamile kungumbono omuhle. Bheka lesi sihloko seNew York Times ngezizathu. New York Times Article: Icala Lokuqasha Ummeli. Sinamahhovisi ngokusebenzisa iNew Jersey, futhi abameli bethu bezezakhiwo baye babamba iqhaza kuzo zonke izifunda eziseNew Jersey. Izikhathi eziningi, njengabathengisi akudingeki ukuthi ubekhona lapho kuvalwa futhi bangavala ngeposi. Ngabathengi okuvame ukuthi baye emhlanganweni wokuvala ukusayina kuwo wonke amadokhumenti wempahla ebanjiswayo nokunye okunjalo.
Sithinte ku (973) 200-1111 noma usithumele i-imeyili ku [Email protected]
Pingback: Ngabe Ngidinga Ukuqasha Ummeli Ngokuvalwa Kwempahla Yami eNJ? - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers